DRC Glossary : Somali | Af Soomaali | National Ethnic Disability Alliance: NEDA
Ku Xadgudub: U tixraac qeexitaanka Rabshada iyo Xadgudubka.
Dhammaan goobaha iyo daruufaha: Erayada ‘dhammaan goobaha iyo duruufaha’ waxaa loo isticmaalay Xeerarka Tixraaca ee Guddiga Boqortooyada ee Naafada. Waxay ka dhigan tahay in Guddiga naafada ee boqortooyada uu baari karo khibradaha dadka iyo xaaladaha meelo badan oo kala duwan, sida iskuulada, goobaha shaqada, jeelasha iyo xarumaha lagu hayo, guryaha kooxaha, guryaha qoysaska, isbitaalada, iyo xarumaha caafimaadka maskaxda.
Guddoomiye: Guddoomiyaha Guddiga Boqortooyada ee Naafada waa hoggaamiyaha wakiilada. Gudoomiyaha waa Mudane. Ronald Sackville AO QC, oo ahaa garsoore.
Wakiilka: Wakiiladu waa dadka ay Dowladdu u dooratay inay hoggaamiyaan Guddi Boqortooyo. Wakiilladu waxay siyaabo kala duwan u baaraan arrimaha la xiriira Guddiga Boqortooyada, sida inay la hadlaan shakhsiyaad iyo khubaro, weydiistaan ​​cilmi baaris, iyo inay su'aalo ku weydiiyaan dhageysiyada dadweynaha. Toddoba xubnood ayaa hoggaaminaya Guddiga Boqortooyada Naafada.
Ku qasbida markhaatiga: Ku qasbida markhaatiga waa markay Guddiga Naafada ee Boqortooyada u baahdaan qof inuu ka hadlo dhageysiga dadweynaha oo uu caddeyn bixiyo. Waa dambi ciqaab ah inaadan ka soo qeybgalin dhageysiga dacwada markii ay kugu qasbaan Guddiga Boqortooyada. Guddiga Naafada ee Boqortooyada ayaa sheegay inaysan ku qasbi doonin dadka naafada ah, daryeelayaashooda ama xubnaha qoyskooda inay ka hadlaan dhageysiga dadweynaha.
U hogaansanaanta Ogeysiiska Soosaarida: U hogaansanaanta ogaysiiska soosaarida macnaheedu waa bixinta macluumaadka ama dukumintiyada ay u baahan yihiin Guddiga Boqortooyada ee Naafada. Waa dambi in aan la siinin Guddiga Boqortooyada ee Naafada macluumaad ama dukumiintiyo ay ugu baahan yihiin ogeysiis inay soo saarto. Haddii aad hesho ogeysiiska soo saarida, waa inaad heshaa talo sharciyeed madaxbannaan. Your Story Disability Legal Support waxay ku siin karaan talooyin sharci oo bilaash ah.
Macluumaadka Qarsoodiga ah: Macluumaadka qarsoodiga ah waa macluumaad aad rabto ineey ahaato mid qarsoodi ah marka aad sheekadaada la wadaagayso Guddiga Boqortooyada ee Naafada Waxaa jira qaabab kala duwan oo loo hubiyo in macluumaadka aad siinayso Guddiga Boqortooyada ee Naafada uusan qof kale arki karin. Tan waxaa ka mid ah ka dib markay dhammaato howlaha Guddiga Boqortooyada ee Naafada. Haddii aad rabto in laguu xafido qeybo ka mid ah ama gebi ahaanba sheekadaada, waa inaad heshaa talooyin sharciyeed oo madax bannaan. Your Story Disability Legal Support waxay ku siin karaan talooyin sharci oo bilaash ah.
Naafo: Naafanimada waxey ku micneeyeen Guddiga Boqortooyada nooc kasta oo naafonimo ah, haduu qofku ku dhashey, ama ay ku timid xanuun daraadeed, shil, ama gabow. Naafonimadu waxay beddeli kartaa habka uu qofku u fikiro, u dhaqaaqo, u hadlo, u dareemo, wax u arko, u maqlo una wada hadlo.
Dhiig-miirashada: Dhiig-miirashada waa marka qof ama urur kaa faa'iideysto. Tusaalooyinka dhiig-miirashada waa:
Si qaldan loo isticmaalo ama xatooyo lacagtaada ama alaabtaada
In aan lagu siin mushaharka saxda ah
Adiga oo lagaaga faa'iideysanaya galmada
In lagaa horjoogsado inaad hesho dallacsiin shaqo ama shaqo
Dejinta Caafimaadka: Goobaha caafimaad dejinta waa meelaha dadku booqan karaan si ay uga helaan daryeel caafimaad, sida:
Rugaha caafimaadka GP
Dhakhaatiirta jimicsiga jirka
Daaweeyayaasha dhaqdhaqaaqa jirka
Waxbarashada loo dhan yahay: Waxbarashada loo dhan yahay waa halka ay carruurta, dhalinyarada ama ardayda qaangaarka ah ee naafada ah ay isku fasal la yihiin ardayda kale ee bulshada.
Qorshaha Kaalmada Maaliyadeed ee Sharciga ah: Qorshaha Kaalmada Dhaqaale ee Sharciga ah waa kaalmada maaliyadeed ee la heli karo si loogu daboolo kharashaadkaaga sharciga xaaladaha qaarkood. Kharashaadka sharciga ayaa la dabooli doonaa markii si rasmi ah ay ku weydiiyaan Guddiga Boqortooyada ee Naafada inaad:
Ka noqotid markhaati dhageysiga dadweynaha.
Ka qaybgashid wareysi ay kula yeeshaan.
Siisid macluumaad ama dukumiinti.
Dayacaad: Dayacaad waa marka qofku ku siin waayo caawimaad sida loogu tala galay. Dayacaaddu waxay noqon kartaa wax hal mar dhaca, ama waxay ku soo noqnoqon kartaa waqti ka dib. Qofku wuu ku dayici karaa ayada oo uusan ula jeedin inuu dhibaato kuu geysto.
Tusaalooyinka dayacaada waa sida in aan lagu siin:
Daaweynta ama daawooyinka
Taageero ku habboon oo kaa caawisa inaad dadka kale la xiriirto
Taageero habboon oo kaa caawisa inaad ku wareegto
Ogeysiiska Wax Soo Saarka: Ogeysiiska soo saarida waa dukumiinti rasmi ah oo ay soo dirtay Guddiga Boqortooyada ee Naafada oo looga baahan yahay qof ama urur inay siiyaan macluumaad ama dukumiinti. Haddii aad hesho ogeysiiska soo saarida, waa inaad heshaa talo sharciyeed madaxbannaan. Your Story Disability Legal Support waxay ku siin karaan talooyin sharci oo bilaash ah.
Xafiiska Caawinta Garyaqaanka: Qareenada ka shaqeeya Xafiiska Garyaqaanka Caawinta waxay siiyaan talo sharci iyo taakuleyn Guddiga Boqortooyada ee Naafada.
Tilmaamaha Tababarka: Tilmaamaha ku dhaqanka waa dukumiintiyo ay abuurtay Guddiga Boqortooyada ee Naafada oo sharxaya sida ay wax u wajahayaan, sida dhageysiga dadweynaha. Waxaa jira toddobo Tilmaamood oo Tababar ah oo ka hadlaya dhaqannada iyo habraaca Guddiga Boqortooyada ee Naafada.
Ka ilaalinta aargudasho: Ka ilaalinta aargudashadu waa waxyaabaha kaa badbaadin kara waxyeelada haddii aad doorato inaad wadaagto sheekadaada. Haddii aad ka walwalsan tahay ciqaab, waa inaad heshaa talo sharci oo madaxbannaan. Your Story Disability Legal Support waxay ku siin karaan talooyin sharci oo bilaash ah.
Dhageysiga Dadweynaha: Dhageysiga dadweynaha waa dhacdo rasmi ah, sida dhageysiga maxkamadda, halkaas oo dadku ku bixiyaan caddeyn ku saabsan dhacdooyinka iyo arrimaha la xiriira Guddiga Boqortooyada ee Naafada. Guddiga Boqortooyada ee Naafada ayaa ku martiqaadaya dadka qaarkood inay kula wadaagaan sheekadooda dhageysiga dadweynaha. Haddii lagugu casuumo inaad la wadaagto sheekadaada dhageysi dadweyne, waa inaad heshaa talo sharci oo madaxbanaan. Your Story Disability Legal Support waxay ku siin karaan talooyin sharci oo bilaash ah.
Waxqabadka Xaddidan: Waxqabadka xaddidan waa ficillada xaddidaya xuquuqda ama xorriyadda dhaqdhaqaaqa ee qofka. Waxay ka mid noqon karaan adeegsiga waxyaalaha jirka lagu xakameeyo, sida in qofka dhulka la dhigo, ama in daawada la isticmaalo si loo dajiyo qofka.
Guddiga Boqortooyo: Baaritaan Boqortooyo waa baaritaan madaxbanaan oo ku saabsan arin muhiimad weyn leh. Guddiyada Boqortooyada waxay talooyin u soo jeediyaan dowladda wixii ku saabsan waxa isbadal ku imaan kara.
Tacliinta Gaarka ah: Waxbarashada khaaska ah waa halka carruurta iyo dhalinyarada naafada ah lagu baro si ka duwan ardayda kale ee bulshada. Ardayda naafada ah waxaa lagu bari karaa barnaamijyo gaar ah ama waxay dhigan karaan iskuullo kala duwan.
Soo Gudbin: Soo Gudbintu waa dariiq aad adigu sheekadaada ugu sheegto Guddiga Naafada ee Boqortooyada. Waxaad ku qori kartaa, ku duubi kartaa, ama ku sawiri kartaa sheekadaada luuqadaada una diri kartaa Guddiga Naafada ee Boqortooyada. Waxaad sidoo kale weydiisan kartaa Guddiga Naafada ee Boqortooyada in qaar ama qaybo ka mid ah sheekadaada loo ilaaliyo si gaar ah.
Soo Gudbin (qofka qoray aanan la sheegin - oo lagu daabacay websaydhka): Adigu waad kala dooran kartaa in soo gudbintaada lala wadaagi karo dad badan ama qarsoodi laga dhigi karo. Haddii aad doorato "in qofka aad tahay la’ogaan – waxyaabaha lagu daabacay websaydhka", qaybo ka mid ah gudbintaada waxaa lagu daabici karaa websaydhka Guddiga Boqortooyada ee Naafada ama warbixintooda. Hay'ada Guddiga Boqortooyada ee Naafada ma soo daabici doonto wax loo isticmaali karo in lagugu aqoonsado, sida magacaaga ama cinwaankaaga. Haddii aadan hubin, waxaad heli kartaa talo sharciyeed madaxbannaan. Your Story Disability Legal Support waxay ku siin karaan talooyin sharci oo bilaash ah.
Soo Gudbinta (Dadweynaha lala wadaagayo - oo lagu daabacay websaydhka): Adigu waad kala dooran kartaa in soo gudbintaada lala wadaagi karo dad badan ama qarsoodi laga dhigi karo. Haddii aad dooratid "Dadweynaha in lala wadaago- oo lagu daabacay bogga", qaybo ka mid ah gudbintaada waxaa lagu daabici karaa websaydhka Guddiga Boqortooyada ee Naafada ama waxaa loogu gudbin karaa dukumiintiyadooda iyo warbixinnadooda guud. Guddiga Boqortooyada ee Naafada ayaa laga yaabaa inay daabacaan magacaaga iyo faahfaahinta macluumaadkaaga shaqsiyeed, laakiin ma daabici doonaan faahfaahinta xiriirkaaga, sida lambarka taleefankaaga iyo cinwaankaaga. Haddii aadan hubin, waxaad heli kartaa talo sharciyeed madaxbannaan. Your Story Disability Legal Support waxay ku siin karaan talooyin sharci oo bilaash ah.
Subpoena (Amar maxkamadeed): Subpoena waa dukumiinti rasmi ah oo lagu amro qof ama urur inuu dhiibo dukumiintiyada. Badanaa waxaa soo saara maxkamad. Waa suurtagal in qof isku dayo inuu ku helo macluumaadka aad siisay Guddiga Boqortooyada ee Naafada iyada oo loo marayo dalab maxkamadeed oo uu isku dayo inuu u isticmaalo macluumaadkaaga kiis maxkamadeed. Haddii aad ka walwalsan tahay warqad maxkamadeed maxkamad-yeeris waa inaad hesho talo sharciyeed madax-bannaan. Your Story Disability Legal Support waxay ku siin karaan talooyin sharci oo bilaash ah.
Shuruudaha Tixraaca: Shuruudaha tixraaca waxay u sheegeysaa Guddiga Boqortooyada ee Naafada waxa ay tahay inay eegaan qeyb ka mid ah baaritaankooda.
Bayaanka Markhaatiga: Bayaanka markhaatigu waa dukumiinti rasmi ah oo tilmaamaya dhacdooyinka ama arrimaha quseeya sheekadaada. Waxaa badanaa lagaa codsanayaa inaad diyaarsato bayaanka markhaatiga haddii aad markhaati ka tahay dhageysiga dadweynaha. Waxaad weydiisan kartaa qareen inuu kaa caawiyo diyaarinta bayaanka markhaatiga. Haddii lagu weydiiyo inaad markhaati noqoto, waa inaad heshaa talo sharciyeed madaxbannaan. Waxaad talo sharciyeed ka heli kartaa Qorshaha Kaalmada Maaliyadeed ee Sharciga ah. Sheekadaada Naafonimada ee ka Caawinta Sharciga waxay kugu xiri kartaa qareen.
Sheekadaada Naafonimada ee ka Caawinta Sharciga: Tixraac qeexitaanka Adeegga La-talinta Sharciga ee Qaranka
Download PDF version of the DRC Glossary of Terms in Somali | Af Soomaali